समाचार - कसरी अनुकूलित खाना प्याकेजि bag ब्यागको सामग्री छनौट गर्ने?
अनुकूलित खाना प्याकेजिaging ब्यागको सामग्री कसरी छनौट गर्ने？
सामान्यतया, निम्न सिद्धान्तहरू खाना प्याकेजि materials सामग्रीको चयनमा लागू हुन्छन्।
१. पत्राचारको सिद्धान्त
किनभने खाना उच्च, मध्यम र कम ग्रेडहरू प्रयोगको दायरा र स्थानमा निर्भर गर्दछ, सामग्री वा डिजाईनको बिभिन्न ग्रेडहरू खानाको बिभिन्न ग्रेड अनुसार छनौट हुनुपर्छ।
खाद्य पदार्थको विविधता र विशेषताहरूको कारण, तिनीहरूलाई बिभिन्न सुरक्षाात्मक कार्यहरू आवश्यक पर्दछ। प्याकेजिंग सामग्री अलग खाद्य पदार्थ को बिभिन्न विशेषताहरु र विभिन्न परिसंचरण शर्तहरु को लागी चयन गर्न अनिवार्य छ। उदाहरण को लागी, पफ्ड खानाको लागि प्याकेजि materials सामग्रीलाई उच्च वायुरोधी क्षमता चाहिन्छ, जबकि अण्डाहरूको लागि प्याकेजि transport यातायातका लागि आघात-शोषक हुनु आवश्यक छ। उच्च तापमान बाँझी खाना उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्रीबाट बनेको हुनुपर्दछ, र कम तापमान रेफ्रिजरेटेड खाना कम तापमान प्रतिरोधी प्याकेजि materials सामग्रीबाट बनाउनु पर्छ। यो भन्नु पर्ने हो, हामीले खानाको विशेषताहरू, जलवायु (वातावरणीय) सर्तहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, प्याकेजिंग सामग्रीको चयनमा स्थानान्तरण विधि र लि links्क (सर्कुलेशन सहित)। खाना को गुणहरु को लागी ओसिलोपन, चाप, प्रकाश, गन्ध, मोल्ड, आदि आवश्यक छ। मौसम र वातावरणीय अवस्थाहरूमा तापमान, आर्द्रता, तापमान भिन्नता, आर्द्रता अन्तर, हावाको चाप, हावामा ग्यास संरचना, आदि शामिल छन्। चक्रीय कारकहरू यातायात दूरी, मोड समावेश गर्दछ। यातायात (व्यक्ति, कार, जहाज, विमान, आदि) र सडक सर्तहरू। थप रूपमा, यो बजार र ग्राहकहरूको स्वीकृति अनुकूलन प्याकेजिंग को लागी बिभिन्न देशहरु, राष्ट्रियता र क्षेत्रहरु को बिभिन्न आवश्यकताहरु लाई विचार गर्न आवश्यक छ।
P. अर्थशास्त्रको सिद्धान्त
प्याकेजि materials सामग्रीले आफ्नो अर्थशास्त्रलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। खातामा सुविधाहरू, गुणस्तर र प्याकेज गरिएको खानाको ग्रेडलाई ध्यानमा राखे पछि, न्यूनतम लागत प्राप्त गर्न डिजाइन, उत्पादन र विज्ञापन कारकहरू विचार गरिनेछ। प्याकेजिंग सामग्रीको लागत केवल यसको बजार खरीद लागतसँग सम्बन्धित छैन, तर प्रसंस्करण लागत र सर्कुलेशन लागतसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसकारण, प्याकेजिंग डिजाइन को छनोटमा सबै भन्दा उपयुक्त सामग्री छनौट गर्न विभिन्न कारकहरू विचार गर्नुपर्छ।
Pr. समन्वयको सिद्धान्त
प्याकेजि materials सामग्रीको एउटै खाना प्याक गर्ने बिभिन्न स्थितिमा फरक भूमिका र अर्थहरू छन्। यसको स्थान अनुसार, उत्पाद प्याकेजि inner्ग भित्री प्याकेजि,, मध्यवर्ती प्याकेजिंग र बाहिरी प्याकेजिंगमा विभाजन गर्न सकिन्छ। बाह्य प्याकेजि्गले मुख्य रूपमा बेच्नको उत्पादनको चित्र र शेल्फमा समग्र प्याकेजि represents प्रतिनिधित्व गर्दछ। भित्री प्याकेजि प्याकेज हो जुन खानाको सिधा सम्पर्कमा आउँदछ। भित्री प्याकेजि and र बाह्य प्याकेजिंग बीचको प्याकेजि the्ग मध्यवर्ती प्याकेजिंग हो। भित्री प्याकेजिंगले लचिलो प्याकेजि materials सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै प्लास्टिकको सफ्ट सामग्री, कागज, एल्युमिनियम पन्नी र कम्पोजिट प्याकेजि materials सामग्री; बफरिंग गुणहरू सहितको बफर सामग्रीहरू मध्यवर्ती प्याकेजिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ； बाह्य प्याकेजि्ग खाना गुणहरू, मुख्य रूपमा कार्डबोर्ड वा डिब्बाहरू अनुसार छनौट गरिन्छ। फूड प्याकेजि materials सामग्री र प्याकेजि ofको भूमिकालाई मिलाउन र समन्वय गर्न कार्यात्मक आवश्यकताहरू र आर्थिक लागतहरू प्राप्त गर्न यसलाई विस्तृत विश्लेषणको आवश्यक पर्दछ।
Est. इस्टेटिकको सिद्धान्त
प्याकेजिंग सामग्री छनौट गर्दा, हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ कि यस सामग्रीको साथ डिजाइन गरिएको खाना प्याकेजिंग राम्रोसँग बेच्न सक्छ कि सक्दैन। यो एक सौंदर्य सिद्धान्त हो, वास्तवमा कला र प्याकेजि appearance उपस्थितिको संयोजन। रंग, बनावट, पारदर्शिता, कठोरता, चिकनाई र प्याकेजिंग सामग्रीको सतह सजावट प्याकेजि materials सामग्रीको कलात्मक सामग्री हो। प्याकेजिंग सामग्री जसले कलाको शक्ति अभिव्यक्त गर्दछ कागज, प्लास्टिक, गिलास, धातु र सिरेमिकहरू, आदि।
Pr. विज्ञानको सिद्धान्त
यो प्याकेजिंग सामग्री वैज्ञानिक छनौट गर्न बजार, समारोह र खपत कारक अनुसार सामग्री निकाल्न आवश्यक छ। खाना प्याकेजि materials सामग्रीको चयन प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र उपकरण प्रकृयामा आधारित हुनुपर्दछ, र विज्ञान र अभ्यासबाट सुरू हुन्छ। उपभोक्ता मनोविज्ञान र बजार माग, वातावरणीय संरक्षण आवश्यकताहरू, मूल्य र सन्तुष्टि समारोह, नयाँ प्रविधि र बजार गतिशीलता, आदि सहितका सुविधाहरू सहित धेरै कारकहरू विचार गर्नुपर्छ।
Pack. प्याकेजिंग प्रविधि र विधिहरूको साथ एकीकरणको सिद्धान्तहरू
दिइएको खानाको लागि, सबै भन्दा उपयुक्त प्याकेजिंग प्राविधिक उपयुक्त प्याकेजि materials सामग्री र कन्टेनरहरूको चयन पछि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्याकेजि technology टेक्नोलोजीको छनौट प्याकेजिंग सामग्री र प्याकेज गरिएको खानाको बजार स्थितिसँग नजिकको सम्बन्धित छ। समान खानाले सामान्यतया समान प्याकेजि functions कार्यहरू र प्रभावहरू प्राप्त गर्न विभिन्न प्याकेजिaging टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, तर प्याकेजि costs लागतहरू फरक हुन्छन्। त्यसकारण कहिलेकाँही, प्याकेजिंग आवश्यकताहरू र डिजाइन नतीजाहरू प्राप्त गर्न प्याकेजिंग सामग्री र प्याकेजिंग टेक्नोलोजी जोड्नु आवश्यक छ।
थप रूपमा, खाद्य प्याकेजि materials सामग्रीको डिजाइन र चयन समान सुविधाहरू वा समान खाद्यान्नको साथ अवस्थित वा पहिले नै प्रयोग गरिएको खाद्य सामग्रीको सन्दर्भमा बनाउन सकिन्छ।